Faysal Waraabe'' Farmaajo Cashar ayaan ugu dhigi doonaa Muqdsisho uu Marti ku yahay hadii uu faraha lasoo galo .
Tuesday February 14, 2017 - 13:07:47 in Wararka
Hogaamiyaha xisbiga Mucaaradka UCID Feysal Cali Waraabe oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay qiimeyn doonaan xaalka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee dhawaan loo doortay Maxamed Farmaajo.
Waxa uu sheegay in ay qiimeyn ku wadaan Madaxweyne Farmaajo oo dhawaan xilka la wareegaya, waxa uuna intaa raaciyay hadii uu u dhaqmo sida Madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh in ay taasi keeni doonto in ay isku dhacaan.
''Waxaan leeyahay Madaxweyne Farmaajo hadaad raacdo jidkii adeerkaa xaalku waxa uu noqon doonaa in la iska kaa celiyo, Somalilnd xiligan waa ay ka xoog badan tahay sidii hore'' Ayuu yiri Feysal Cali Waraabe.
Gudoomiyaha Xisbiga UCID ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu marti ku yahay sida uu tilmaamay magaalada Muqdisho, waxa uuna intaa raaciyay in ay cashar ugu dhigi doonaan Muqdisho hadii uu arimhooda faraha lasoo galo.
'' Waxana idin sheegayaa Farmaajo anigan aad ii jeedaan ayaa ka Wadaniyadsan waxaana leeyahay Adeer Marti ayaad ku tahay Muqdisho hadii aad farahan nala soo gasho cashar ayaan kuu dhigi doonaa'' Ayuu ku goodiya Feysal Cali Waraabe.
Siyaasiga Feysal Cali Waraabe ayaa lagu tilmaamay in uu yahay Siyaasi af adag oo inta badan iska sheega waxii afkiisa soo qabta, waxa uuna marar badan ka dhawaajiyay hadalo naceyb abuuraya dadkana iska horkeenaya.